Bonneville ဆီယက်တဲလ်မီဒီယာအုပ်စုသည်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့အဖွဲ့အစည်းပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုသည်းခံ
Webster ရဲ့အဘိဓါန်မှာ "စကားလုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ပါတယ်ပွောငျးလဲ"အဖြစ်" ပြောင်းလဲပစ်ရန်, ကွဲပြားခြားနားသောစေခြင်းငှါ၎င်း, တယောက်ကိုတယောက်အခြေအနေမှရှောက်သွားစေရန်။ "အဘယ်အရာကိုမျှအစဉ်အဆက်တူဖြစ်နေဆဲနှင့်ဆက်ဆက်နှင့်အတူအမှုဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group ၏ ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းလျှက်ပါလိမ့်မည်မည်သို့မကြာသေးခင်ကကြေညာချက် ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း။ ဒါကကြေငြာလေးသစ်ကိုဒါရိုက်တာ၏ဌာနဆိုင်ရာဒေသများရှိဦးဆောင်လမ်းပြရန်ရွေးချယ်ထားသည့်ရာအင်္ဂါနေ့, သြဂုတ်လ 20th ပေါ်တွင်ယခုအပတ်အစောပိုင်းကခဲ့:
710 ESPN ဆီယက်တဲလ်မှာ Program ကိုဒါရိုက်တာ
အဆိုပါပရိုဂရမ်ဌာနခွဲရပါလိမ့်မယ် 710 ESPN ဆီယက်တဲလ် Program ကိုဒါရိုက်တာ, သူ Mike Salk Programming ၏ဒါရိုက်တာ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသို့ပြောင်းလဲ။ ဒီအခန်းကဏ္ဍများတွင်သူ Mike ကြီးကြပ်အုပ်ဖြစ်လိမ့်မည် KIRO ရေဒီယို 97.3 FM ရေ, 710 ESPN ဆီယက်တဲလ်နှင့် လေး 770 KTTH ရေဒီယိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ။
710 ESPN ဆီယက်တဲလ်မှာအထွေထွေအရောင်း Manager ကို
အဆိုပါအရောင်းဌာနခွဲကဦးဆောင်ကြလိမ့်မည် Cathy Cangianoကိုလည်းအတွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူကို 710 ESPN ဆီယက်တဲလ် အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်။ သူမ၏အသစ်များကိုအရောင်းဒါရိုက်တာအခန်းကဏ္ဍများတွင် Cathy အတူ 710 ESPN ဆီယက်တဲလ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် KIRO ရေဒီယို 97.3 FM ရေ, လေး 770 KTTHနှင့်အပေါ်စကားကိုနားထောင်နိုင်သည့်ဆီယက်တဲလ်သင်ျဘောသားရေဒီယို, TuneIn.
Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့မှာ controller
controller, Alison Lichtbach အဆိုပါ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့အတွင်းမှာစီးပွားရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေးဌာနဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲသူမ၏ရပါလိမ့်မယ်အရာ, ဘဏ္ဍာရေးသစ်ကိုဒါရိုက်တာဖြစ်လိမ့်မည်။
အထွေထွေအရောင်းမန်နေဂျာ Bonneville ဆီယက်တဲလ် - KIRO ရေဒီယို
အသစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးအခန်းကဏ္ဍ KIRO / KTTH အရောင်း Manager ကိုအားဖြင့်ကျင်းပပါလိမ့်မည်, tina Sorensen သူမအဘို့အကြောင်းအရာနှင့်ဝင်ငွေနှစ်ဦးစလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ Bonneville ဆီယက်တဲလ်ဒစ်ဂျစ်တယ် Properties ကို။ အထွေထွေအရောင်းမန်နေဂျာ Ethan ကယ်လီ KIRO / KTTH မှာသူမ၏ဟောင်းတဦးအခန်းကဏ္ဍယူဆပါလိမ့်မယ်။
ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်းနေစဉ်, ဒါရိုက်တာဆဲဖြစ်ပါသည် Marin Brustuen တူသော Expand တာဝန်များနှင့်အတူနေချိန်မှာ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့မန်နေဂျာတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အဖြစ်လူ့အရင်းအမြစ်များကိုဌာနသို့ဦးတည်သွားစေရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ် Bryan Buckalew, KIRO များအတွက်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒါရိုက်တာအဖြစ်အလုပ်လုပ်မည် Colleen O 'Brien ရေဒီယိုမန်နေဂျင်းအယ်ဒီတာအဖြစ် KIRO သတင်းဌာနကိုဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ မကြာသေးမီကထို့အတွက်၏ရလဒ်အဖြစ် KIRO ရေဒီယိုများအတွက်သတင်းနှင့်ပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာ၏လက်ရှိဖျက်သိမ်းလိုက်သောအနေအထား unfilled ရှိနေပါဦးမည်။
Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့သည်အဘယ်အရာကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနည်းလမ်
VP / Market ကမန်နေဂျာ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့, KIRO ရေဒီယို 710 ESPN နှင့်ဆီယက်တဲလ် 770 KTTH mynw.com
မည်သို့ပင်ရာဌာနတာဝန်ခံထားသူအချို့စိုးရိမ်မှုများခြောဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည့်ဆိုင်းမိမိတို့ဌာနဦးအဖြစ်အသစ်သောဒါရိုက်တာများကိုလိုက်နာကြလိမ့်မည်သောစိန်ခေါ်မှုများ၏နိုးထမှာကြီးပြင်းပါလိမ့်မည်။ လက်ရှိပြန်လည်ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group ၏ VP / Market က Manager ကို Dave Pridemore သူကဖော်ပြထားသည့်အခါဒီကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း "ဤသူတို့သစိန်ခေါ်မှုတာဝန်ကျအဘို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီတော်မူသောငါတို့၏အဖှဲ့အစညျးအတှငျးရှိခေါင်းဆောင်များသက်သေပြနေကြတယ်," "သူတို့ကတီထွင်ဆန်းသစ်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနေသောနှင့်ဝေးရောက်ရှိအသံနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များ၏အနာဂတ်မျှော်ကြည့်အဖြစ်လမ်းညွှန်မှုပေးပြင်ဆင်ထားကြသည်။ ယခုအသစ်တည်ဆောက်ပုံ 2020 နှင့်ကျော်လွန်ပြီးကျနော်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုသေချာနှင့် Bonneville ဆီယက်တဲလ်သိသိသာသာပရိသတ်ကိုတိုးတက်မှုနှုန်း generate ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အစိုင်အခဲရွယ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်ဤအာကာသအတွင်းကောင်းစွာ positive သည်အတိုင်း, အလွန်အရေးကြီးသည်ဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပေါ်မှာငါတို့နေ့စဉ်အာရုံစိုက် elevates ။ "
ပြောင်းလဲမှုကိုကြီးထွားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကအတွင်းဖြစ်ပေါ်ရန်အဘို့အဖြစ်ပျက်ရမည်ဟုအလိုက်အထိုက်နေတတ်၏မလွှဲမရှောင်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ နောက်ကျော 1964 အတွက်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းရေး, ထိုကတည်းက Bonneville အင်တာနေရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းက ခြောရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်အတွက်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးအဖြစ်သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောပြောင်းလဲမှုသိသိသာသာပမာဏ, ခံခဲ့သည်။ ၎င်း၏ကျယ်ပြန့်လက်လှမ်းမမီမှတဆင့်အဆိုပါ Bonneville အင်တာနေရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းက, ဆော connect, အကြောင်းကြားနှင့်ပါဝင်သည်ရာသည်၎င်း၏မြောက်မြားစွာပြည်နယ်စျေးကွက်, ဖြတ်ပြီးအမျိုးမျိုးသောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်မိသားစုများဆင်နွှဲဖို့ကောင်းမွန်စွာပြုကြပြီ
အဆိုပါ Bonneville ဆီယက်တဲလ်မီဒီယာအုပ်စုတစ်စုရဲ့ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိသံသယ Bonneville အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတစ်ဖွဲ့လုံးကရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအသံလွှင့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အတွင်းလုပ်ကိုင်ဆက်လက်ဘယ်လိုအောင်မြင်သောအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့ချက်ချင်းသြဂုတ်လ 26 တနင်္လာနေ့ထိရောက်သောဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်များအတွက်သစ်ကိုဒါရိုက်တာ၏ချိန်းဆို။ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group ၏ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, ထို့နောက်ထုတ်စစ်ဆေး www.bonneville.com.
710 ESPN ဆီယက်တဲလ် လေး 770 KTTH Bonneville အင်တာနေရှင်နယ်ကော်ပိုရေးရှင်းက Bonneville ဆီယက်တဲလ်ဒစ်ဂျစ်တယ် Properties ကို။ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့ Dave Pridemore FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor KIRO ရေဒီယို KIRO ရေဒီယို 97.3 FM ရေ programming ကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဆီယက်တဲလ် ဆီယက်တဲလ်သင်ျဘောသားရေဒီယို လှံ & Arrows အဆိုပါ Bonneville ဆီယက်တဲလ် Media Group သို့ တီဗီနည်းပညာ ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-08-23
ယခင်: IBC2019 မှာ IP ကိုကျော် Apantac ဟန်ပြ KVM
နောက်တစ်ခု: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်နာ / မာလ်တီမီဒီယာရေးသားသူ